Snapdragon 768G bụ ihe nhazi ọhụrụ nke Qualcomm | Gam akporosis
Snapdragon 768G bụ ihe nhazi ọhụrụ nke Qualcomm
Qualcomm ekwuputala ihe nhazi ohuru maka igwe eji eme ihe maka egwuregwu na nke na-enweta aha Snapdragon 768G. Ọ bụ mgbanwe nke mgbawa Snapdragon 765G na ekwentị izizi iji tinye usoro a CPU ga-abụ Redmi K30 5G Racing Edition ọhụrụ, nke bụ ụlọ ọrụ Eshia gosipụtara ugbu a.
El Ihe nhazi Snapdragon 768G Ọ na-abịa na mmelite mara mma na 8 cores, GPU na ọmarịcha mmụba na nkwado, ọ dịkwa mma ịkọ na ọ ga-enwe ezigbo njikọta. Ọ bụ mgbawa nanometer 7, ọ bụ nhọrọ akụ na ụba maka ọtụtụ ndị nrụpụta na-ekpebi na njedebe ịhọrọ SoC gbadoro anya na arụmọrụ dị mma na egwuregwu.
1 Snapdragon 768G, ozi niile gbasara ihe nhazi ọhụrụ a
Snapdragon 768G, ozi niile gbasara ihe nhazi ọhụrụ a
Ihe nhazi a Qualcomm dabere na 7-core XNUMXnm, nke mbụ n'ime ha bụ Cortex-A76 na 2,8 GHz (na-ekpuchi anya, gbasaa ugboro ugboro), nke abụọ bụ isi 2,2 GHz na isii ndị fọdụrụ nwere ọnụọgụ nke 1,8 GHz.na SD765G ọ bụ 15%.
Na mpaghara eserese, o nwere Adreno 620 na mmelite nke 15% ma e jiri ya tụnyere Snapdragon 765G, ọ na-agbakwunye nkwado maka HDR10 +, Vulkan 1.1, Dolby Vision, OpenGL 3.2, OpenCL 2.0 FP na DirectX 12. Mwube ahụ dị ezigbo mkpa na General arụmọrụ, fọdụrụ na-ahụ isi ihe ọ ga-enweta na mbụ benchmark ozugbo ọsọ ọsọ nke Redmi K30 abịarute.
Snapdragon 768G chip na-ejikọ Hexagon 696 Artificial Intelligence processor na Vector eXtensions na Tensor Accelerator. Nkwado maka ebe nchekwa RAM na-anọgide na 12 GB nke ụdị LPDDR4X, UFS 3.1 nchekwa ma nwee nkwado maka ogwe Full HD + na 120 Hz.
Ihe nhazi a Qualcomm ga-enye 5G SA na NSA njikọta Ekele maka modem X52, o nwere Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 nkwado, NFC na ngwa ngwa na-akwụ ụgwọ site na USB C 3.1 na Ndenye Ọcha 4 +. Ha kewapụrụ iche n'ihi na ọ bụ otu n'ime ndị nrụpụta ga-ahọrọ n'etiti etiti ọtụtụ ndị nrụpụta na nrụpụta ya.
Ihe nhazi Qualcomm Snapdragon 768G
Rụpụta 7 nm
CPU 1x 2.8 GHz Kryo 475 Prime - 1x 2.2 GHz Kryo 475 Gold - 6x 1.8 GHz Kryo 475 Silver
AKWASTKWỌ ngwa ngwa Ndenye n'Aka 4+
Njikọ 5G - Bluetooth 5.2 - USB-C 3.1 - Wi-Fi 6 - Nkwado NFC
Icheta Ruo 12GB LPDDR4X na 2.1GHz - UFS 3.1
Ngosiputa FullHD + na 120Hz - QHD + na 60Hz - Ngosipụta mpụga QHD + na 60Hz
Ihe nhazi Snapdragon 768G Ọ ga-ahụ ọkụ ozugbo ekwentị izizi bịara, Redmi K30 5G Racing Edition, ọ bụ nke mbụ kụrụ ahịa na Asia.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Snapdragon 768G bụ ihe nhazi ọhụrụ nke Qualcomm
Instagram Lite gafere
Esi gbanwee oge ọ na-ewe iji gbanyụọ ihuenyo nke ama anyị